गिरीश गिरी, ललितपुर, जेठ १० - ‘यो माओवादीसँग मिल्ने कुरा फेरि मैले बुझ्दै नबुझेको हो। डेमोक्रेट्सहरूको हात भनेको हँसिया–हथौडामा छाप हाल्नको निम्ति बनेकै हुँदैन क्या! हात जाँदै जाँदैन। इट नेभर गोज अन। तानाशाही व्यवस्था भइदिएको भए मतदातालाई अह्राउन मिल्थ्यो होला। चुनावै नगरेर माथिका मान्छेले तोकिदिन पनि मिल्थ्यो होला। लोकतन्त्रमा त जनता मालिक हुन्छन्। पार्टीको माथिल्लो तहले भनेको भरमा कहाँ हुन्छ? यहाँ अहिले हामी मेयर, उपमेयरमै जितेको देख्नुभयो नि? माओवादीसँग मिलेको भए म ठोकेर भन्छु, हाम्रो पत्तासाफ हुन्थ्यो।'
ओलीलाई प्रचण्डको जवाफः सपनाको क्रान्ति होइन, उपलब्धिको क्रान्ति चाहियो
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ १० - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सपना देखेर मात्रै नहुने बरु उपलब्धिहरु हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै दाहालले अघिल्लो सरकारले सपनाको क्रान्ति गरेको र आफूले उपलब्धिहरु हासिल गरेको दाबी गरे।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्बोधनको पूर्णपाठ
काठमाडौं, जेठ १० (सेतोपाटी) - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आजैदेखि राजीनामा गर्ने बताएका हुन्। संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री विपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक बस्न नसकेपछि सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन्। हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राजीनामा
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ १० - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विशेष सम्बोधन गर्दै दाहालले १० महिने सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन्।
हेटौंडा मेयरमा एमाले, वडाअध्यक्ष र उपमेयरपछि मेयरमा महत विजयी
सेतोपाटी संवाददाता, हेटौडा, जेठ १० - हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा हरिबहादुर महत विजयी भएका छन्। महतले २३ हजार १ सय २४ मत ल्याएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धि कांग्रेसका आनन्द पराजुलीले २२ हजार ५ सय ९ मत ल्याए। पुरा समाचार
आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ १० - ‘उहाँहरुले कुनै हालतमा पनि संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि अब छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू सिंहदरबार जानुभएको छ’, दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘छलफलपछि आजै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना छ।’
संसद बैठक भोलि ४ बजे सम्मका लागि स्थगित